Ingxubevange wabona blade
Umsebenzi weDynamic ujika isarha
Ukubuyisela kwakhona iblade yesarha
Ukungenisa nokuthumela ngaphandle e-China kwiinyanga ezimbini zokuqala zalo nyaka bekungaphaya kokulindelwe kwimakethi, ngakumbi ukusukela ngo-1995, ngokweenkcukacha ezikhutshwe nguLawulo Jikelele lweeMpahla nge-Matshi 7. Ukongeza, urhwebo lwase China kunye namaqabane aphambili kurhwebo lonyuke kakhulu, ebonisa ukuba indibaniselwano yase China kunye noqoqosho lwehlabathi iye yanzulu ngakumbi. I-Reuters ixele ukuba i-China ilawule ngempumelelo ubhubhane, kwaye ii-odolo zezinto ezichasene nobhubhane phesheya ziyaqhubeka. Ukuphunyezwa kwamanyathelo okwahlula amakhaya kumazwe amaninzi kukhokelele ekuqhambukeni kwemfuno yempahla yabathengi basekhaya kunye ne-elektroniki, ekhokelele ekuvulweni korhwebo lwangaphandle lwase China ngo-2021. Nangona kunjalo, uLawulo Jikelele lwamasiko luye lwabonisa ukuba imeko yezoqoqosho kwihlabathi inzima kwaye inzima, kwaye urhwebo lwangaphandle lwase China lusendleleni ende.
I-ASEAN, i-EU, i-United States ne-Japan ngamaqabane amane aphambili kurhwebo e-China ukusukela ngoJanuwari ukuya ku-Februwari, ngamanqanaba okukhula kwezorhwebo angama-32.9%, 39.8%, 69.6% kunye nama-27.4% kwi-RMB ngokwahlukeneyo. Ngokwe-General Administration yamasiko, ukuthunyelwa kwamanye amazwe e-China e-United States kwaba yi-525.39 yezigidigidi ze-yuan, inyuke nge-75.1 yepesenti kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo, ngelixa intsalela yorhwebo kunye ne-United States yayiyi-33.44 yezigidigidi ze-yuan, ukonyuka kwe-88.2 yeepesenti. Kwangelo xesha linye kulo nyaka uphelileyo, ukungenisa kunye nokuthumela ngaphandle phakathi kwe China ne-United States kwehle nge-19.6 pesenti.
Ngokubanzi, ukungeniswa kunye nokuthunyelwa kwe China kwiinyanga ezimbini zokuqala zalo nyaka akuphelelanga nje kwixesha elifanayo kunyaka ophelileyo, kodwa kukonyuke malunga ne-20% xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kwi-2018 kunye ne-2019 ngaphambi kokuqhambuka. U-Huojianguo, usekela-mongameli we-World Trade Organisation Association of China, uxelele amaxesha ehlabathi nge-7 ka-Matshi ukuba ukungenisa kunye nokuthumela ngaphandle e-China kwiinyanga ezimbini zokuqala zonyaka ophelileyo ngenxa yefuthe lobhubhane. Ngokusekwe kwisiseko esisezantsi ngokwentelekiso, idatha yokungenisa nokuthumela kwelinye ilizwe kulo nyaka kufuneka ibe nokusebenza kakuhle, kodwa idatha ekhutshwe nguLawulo Jikelele lwamasiko isagqithisile kulindelo.
Ngokwedatha yoLawulo Jikelele lwamasiko, kwiinyanga ezimbini zokuqala zalo nyaka, i-China ingenise i-82 yezigidi zeetoni zentsimbi, ukwanda nge-2.8%, ixabiso eliphakathi lokungenisa elizweni i-yuan eyi-942.1, inyuke nge-46.7%; i-oyile ekrwada engeniswe ngaphandle ifikelele kwizigidi ezingama-89.568 zeetoni, ukwanda nge-4.1%, kwaye ixabiso eliphakathi lokungenisa yayiyi-2470.5 yuan ngetoni nganye, yehla nge-27.5%, isiphumo sokwehla ngama-24.6% kwisixa-mali sokungenisa sisonke.
Ulawulo Jikelele lweMicimbi yaseTshayina lukholelwa ukuba urhwebo lwangaphandle lwase China luvule iingcango zalo kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo, nelivule isiqalo esihle sonyaka wonke. Olu phando lubonisa ukuba iiodolo zokuthumela ngaphandle kwamashishini aseTshayina ziye zanda kule minyaka idlulileyo, zibonisa ulindelo oluqinisekileyo kwimeko yokuthumela kwelinye ilizwe kwiinyanga ezi-2-3 ezizayo. I-Bloomberg ikholelwa ekubeni ukuthengisa okuphuma phambili e-China kuye kwanceda ukuxhasa ukubuyela kwe-China kwindyikitya yokufa e-V nokwenza i-China kuphela kwelizwe elikhulayo kuqoqosho olukhulu lwehlabathi ngo-2020.
Ngomhla wesihlanu kweyoKwindla, ingxelo yomsebenzi kaRhulumente yatsho ukuba ithagethi yohlumo loqoqosho lwase China ngowama-2021 yabekwa ngaphezulu kwepesenti ezi-6. U-Huojianguo uthe ukuthunyelwa kwelinye ilizwe e-China kunyuke kakhulu kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo ngenxa yokuba ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kufakiwe kwi-GDP, kubekwa isiseko esiqinileyo sokuphumeza injongo yonyaka opheleleyo.
ISHIGUDUN VILLAGE, QINGJIANG TOWN, YUEQING CITY